Kwezemidlalo kubalulekile ukuba banake hhayi kuphela imiphumela futhi ukuqeqeshwa kwemisipha. Kuyadingeka ukuqapha isimo emalungeni, ikakhulukazi wemikhawulo aphansi. Umthwalo enkulu is phansi ngamadolo, ngakho lapho ukunyakaza abanganaki ukulimala okungase kwenzeke. Futhi ngenxa njalo imithelela ngokomzimba emalungeni othwala: uqwanga ngobugebengu nemisipha babe avuvukele. Ngakho-ke, abasubathi abaluleke kakhulu ukukhetha imishini yemidlalo. Ikakhulukazi kwakudingeka sivala joint kwedolo. Musa ukudida nabo orthoses yezokwelapha, okunikeza baxhashazwe ka kwedolo. Kunezindlela ezihlukahlukene kwezemidlalo omfisha, ungagxambukeli sathutha, kodwa ukuvikela amalunga omzimba ekulimaleni.
Lezi pads amadolo zivame kakhulu isetshenziselwe izinjongo zokwelapha. Iziguli osteoarthritis, samathambo, ngemva ukulimala kanye nokusebenza phezu kwedolo sizigqoke ukunciphisa umthwalo phezu kwedolo, wehlise izinhlungu kanye ukulungisa izingxenye zombili kule sikhundla lengiyo. Kodwa isetshenziswa basuke, futhi abantu bephilile. Ngokwesibonelo, zisebenzisa ukukhiya joint amadolo ngoba lo mdlalo. Abantu uhlangabezana bandisa inkonzo ngokomzimba ngokuvamile savelelwa yinto ehlukumezayo micro nemisipha nemisipha, Ukwenyela, ngedolo nokuvuvukala. Ukuze wehlise ukungakhululeki ngesikhathi uzivocavoca, udinga amadolo. Yena wenza imisebenzi elandelayo:
kunciphisa ubuhlungu, ukuvuvukala nokuvuvukala;
elungisa ngokuhlanganyela sikhundla lengiyo, ekuvimbeleni bafake uqwanga;
Kunciphisa ingozi yokulimala;
Ithuthukisa ukugeleza kwegazi, izindlala zamanzi flow and umzimba;
Kuvikela ngokuhlanganyela kusukela sindisa.
Lezi pads amadolo ibalulekile ikakhulukazi labo abahileleke ezemidlalo zochwepheshe ayikwazi uphazamisa Amazing yakho. I isamba isiza ukugcina uhla motion futhi ekunciphiseni izinhlungu. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukuthuthukisa ukusebenza wezemidlalo.
Iziphi izimfanelo kumele babe kneepads
Bangababambi kwamajoyinti, ezisetshenziswa for ezemidlalo, kufanele Lifanele kunendoda obujwayelekile. Lokhu eliphakeme quality amadolo pads, lapho kungaba yente umsebenti wayo. Kubalulekile ukuthi into esuka lapho orthosis senziwa, ivumela isikhumba ukuphefumula futhi akabubangeli komzimba. Ngaphezu kwalokho, kudingeka ukukhiya kwakudingekile ikakhulukazi kwezemidlalo ezithile. Ngokwesibonelo, uma wenza i-acrobatics, volleyball, sibalo ukushushuluza kudingeka amadolo pads nge elithambile abicah ifaka noma-helium, futhi nolaka amaqembu ezemidlalo patella kumele ivikelwe kwagcizelela umcamelo babehlanganisa.
Yiziphi kwedolo sivala ngokuhlanganyela
Amadolo pads zenziwa ngezinto ezahlukene. Ngaphezu kwalokho, kuye ngezinga of rigidity nemisebenzi, izingidi zitholakala ngezinhlobonhlobo eziningana.
amabhandeshi nokunwebeka kanye opholile wavuma ukusekela ngokuhlanganyela, kodwa kulula ukusebenzisa futhi kancane ukunciphisa umthwalo.
Amabhandeshi eyenziwe impahla nokunwebeka, ukuma efanayo imilenze, ngokuvamile amboze hhayi kuphela ngokuhlanganyela kodwa futhi umlenze nangaphezulu ke. Abakwazi igqoke njengoba Stocking, kodwa elula kakhudlwana labo fixed Velcro fasteners.
Orthoses nge ifaka kanzima noma kwagcizelela amadolo pads zenzelwe ukuvikela ngokuhlanganyela kusukela namabhampa amathonsi.
Kneecaps nenkanuko edlulele eqinile ngokuvamile enikeziwe zensimbi noma plastic ifaka, amalunga stiffeners. Basuke kuyaqabukela esetshenziswa kwezemidlalo, kuphela labo abasubathi abaye bahlupheka yokulimala noma isifo se-ngokuhlanganyela.
Hlukanisa nezinye izinhlobo amadolo pads: separable, compressor, ukufudumala, nge ezinamasondo eyengeziwe futhi ifaka. Ngaphezu kwalokho, zingase ngokuthi ngezindlela ezahlukene. Le abadlali avame ukusetshenziswa ne ngethephu enamathelayo, ebusweni nokunwebeka - opholile. Ukuze ulungise ziyasebenza imilenze, izisekelo, besokunxele, umkaki.
Bangababambi amadolo ngokuhlanganyela zenziwa ngezinto ezahlukene. Lapho ekhetha amadolo pads ezemidlalo kudingeka sinake, ukuze kuyimvelo, kuvumela isikhumba ukuphefumula futhi akusho baxabane nomzimba. zibeke zokwelapha ezinzima zenziwe steel wezokwelapha kanye plastic. Lezi pads amadolo asetshenziswa kuphela abadlali emva ukulimala, njengoba kusinciphise ukunyakaza. Ngokuvamile, ukunciphisa umthwalo, futhi izinhlobo ezimbili zezinkantolo izimpahla ezisetshenziselwa kwedolo.
izindwangu Okuyimvelo: ukotini noma uvolo. Ukuthuthukisa izindawo nokunwebeka angase engezwe Dacron zesivikelo sesifuba. amadolo okunjalo nethonya ukufudumala ngesikhathi kwezemidlalo futhi kuvimbele ngilulekela imisipha kanye nemisipha, futhi hypothermia.
Izinto zokwenziwa: i-polyester, inayiloni Neoprene ne. Zisetshenziswa zonke izinhlobo amadolo pads. I elula kunazo Neoprene amadolo. Yena elungisa kwedolo akuvimbeli hambisa futhi ivumela isikhumba ukuphefumula. Ngaphezu kwalokho, pads amadolo wenza kusukela zokwenziwa izinto ingase isetshenziselwe isikhathi eside.
Lemibiko amadolo pads elisetshenziswa zemidlalo njalo kunabo. kwedolo isamba nokunwebeka kuyadingeka ukunciphisa umthwalo phezu kwedolo. Ngaphezu kwalokho, kukhuthaza kwegazi, aqede ubuhlungu nokuvuvukala. Uma ingozi enkulu yokulimala, imodeli nezimo nge patella nakakhulu. Kukhona ezinye izinhlobo ezithambile amadolo pads:
ngebhandeshi Nokunwebeka kulula ukuyisebenzisa. ngebhandeshi Joint kungaba noma ikuphi ukucindezeleka futhi azigqoke ibhandishi isikhathi eside. Ngebhandeshi eyenziwe impahla yemvelo futhi ivumela isikhumba ukuphefumula.
Ibhande phezu kwedolo we abicah yakhelwe ukusekela patella futhi ekunciphiseni izinhlungu. Kukhona zombili ezizibeni olulodwa futhi double, ukuhlinzeka ukweseka uzinze ngokwengeziwe.
Kubhekwe ukhululekile kakhulu Neoprene sivala eline Velcro. Ziyakwazi kulula ukubeka futhi ulungise usayizi.
Orthoses ukukhiywa eqinile sisetshenziswa kuphela ngemva ukulimala nezinkinga ngokuhlanganyela. Kneepads ukukhulisa rigidity ifakwe metal spokes amalunga omzimba. Banezinhliziyo Uhlaka eqinile ngokuvamile eyenziwe ngepulasitiki, futhi isakhiwo eyinkimbinkimbi. Isetshenziswa orthoses ezinjalo ngemva waphuka futhi dislocations. Kneecaps nenkanuko edlulele eqinile eyenziwe Neoprene noma ezinye impahla nokunwebeka babe metallic stiffener futhi ngokuhlanganyela firmly nquma nokukhawulela ukunyakaza. Zisetshenziswa Arthritis noma arthrosis.
Kodwa Ilokhi kanzima kungahlali kwedolo for ukuqeqeshwa ezemidlalo, njengoba kuvimbela kanzima ukunyakaza. Ngakho-ke, abadlali ngokuvamile zisebenzisa amadolo semi eqinile. Bona ekulinganiseni ngokuhlanganyela ukuze awuvikele ukunyakaza ezingafuneki futhi ukulimala.
Indlela ukukhetha isiqeshana esifanele ezemidlalo
Ukuze amadolo kusiza ngempela abasubathi ukuvimbela ukulimala kanye kunciphisa umthwalo joint, kubalulekile ukukhetha okulungile. Kodwa lokhu ngokuvamile kunzima, ngoba uma uzivocavoca imisipha sezwe esishubile futhi siyashintsha. A kukhethwe kahle ngamadolo Ilokhi ngokuhlanganyela kumele ngokushesha ukuthatha ukuma efiselekayo, ukuzivumelanisa ekushintsheni imisipha futhi enokwethenjelwa silungise ngokuhlanganyela. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba amadolo wakwazi ukubamba up on the fly, kuye ngokuthi umthwalo. Kungcono ukuba zifune usizo onguchwepheshe abangakwazi ukweluleka ukuthi amadolo kuyafaneleka ngaphezulu Kulokhu, futhi kuzosiza ukukhetha ubukhulu.
Into ebaluleke kakhulu ukuba ezikubambayo amadolo ngokuhlanganyela, ukugcina, kodwa akazange aphule futhi wadluliselwa yi kwegazi igazi. Ukuze ubone ukuthi ubukhulu ivolumu ukuba kulinganiswa at kunawo wonke ka 10-15 cm ngenhla kwamadolo. Kuye lokhu, lakhomba inani osayizi. Kodwa kungcono ngaphambi kokuthenga ukukhiya linganisa wakhe, njengoba impumuzo imisipha nhlobo ezahlukene.
Kuhle ezemidlalo Ukugunda
Noma ubani ilimala abathintekayo kwezemidlalo uyazi ngayiphi injongo iyiphi amadolo kungcono ukusebenzisa. udumo lwawo incike nokwethenjelwa, lula ukusetshenziswa kanye izindleko. Le abadlali engcono ezibhekwa ezinye pads kwedolo.
Amadolo Fosta, eyenziwe Neoprene, libhekisela ukukhanya ngebhandeshi nokunwebeka. Anakho faka ekhethekile eyenziwe abicah, esiza ukulungisa hhayi kuphela isizwe, kodwa ivi.
Orthoses kusukela Pharmacels okunokwethenjelwa ukwesekwa kanye nokuvikela ngokuhlanganyela kwedolo. Lezi izibopho nethonya ukufudumala, esiza silondoloze kuyaqina of emisipheni. Amadolo pads elakhelwe lokhu ukunyakaza zenkampani ethile ngesikhathi imisebenzi yangaphandle kanye nemidlalo.
Mueller izibopho Neoprene amadolo inkampani joint ukuvikela ngokuphumelelayo ngokumelene ukulimala. umklamo wabo ne ezizibeni ezine sawela ngokuphephile ikhiye amadolo kunciphisa umthwalo, kodwa ke akukhawuleli ukunyakaza. Kukhona onobuhle Ukuvikelwa ethuthukisiwe ye patella, esivikela ngokuhlanganyela kusukela ukushaqeka.
Variteks amadolo pads zenziwa kusukela Neoprene ne Site hhayi kuphela yamahhashi kodwa nezalo ukubhukuda, ngokuphuma singena ezingosini ze. Amalokhi ezinjalo umsebenzi nozime patella, okuyinto ebaluleke kakhulu ngesikhathi ukuzikhandla okusezingeni eliphezulu ngokomzimba.
Izici Sebenzisa amadolo pads
Uma ukukhululwa eyayigqoke labo engabelwe nokuvuselelwa ngemva ukulimala noma ukunciphisa umthwalo phezu kwedolo ezilimele, kufanele unamathele izincomo zayo ngesikhathi egqoke. Ngokuvamile umdlalo Ukugunda ezigugile ngesikhathi umsebenzi noma imisebenzi yangaphandle. Iningi onobuhle akunconywa ukugqoka angaphezulu kwangu-8. Awukwazi ukugqoka amadolo pads, uma engaphakathi avele izingxenye zensimbi, njengoba kungenzeka zilimaza isikhumba.
Indlela kahle ukunakekela amadolo pads
izibopho Nezimo ngaphandle metal and plastic ifaka kungenziwa wageza umshini, kodwa okungcono izandla, ukuze uzitholele ukuma isikhathi eside. amadolo Semi-eqinile nakho ngeke kusize kusulwe kuphela emanzini abandayo ngaphandle powder. Ukuze ugweme kokulimaza umkhiqizo, asikwazi ironed futhi yomile eduze ukushisa imithombo.
I-National Institute of senhliziyo Ukuhlinzwa kubo. NN Amosov: umlando, incazelo, ikheli. Amosov Institute: Izibuyekezo
Ukususwa kwezimiso papillomas eMoscow izindlela ukususwa, amakheli kwemitholampilo Izibuyekezo
Ischemia palsy, is it ziphathwe kanjani?
Edolobheni elincane e-Russia
Ingadi putty ngoba izihlahla: incazelo, izinhlobo, isicelo. Indlela yokwenza putty engadini?
Olunoketshezi lokuhlanza izandla
Inhlangano yenqubo ukukhiqizwa. nezimiso eziyisisekelo.